ကွန်ပျူတာသုံးရတာ ပိုပြီးလွယ်ကူသွားစေမယ့် windows ကီး Shortcut များ - YOYARLAY Digital Media and News
ကွန်ပျူတာကီးဘုတ်ပေါ်က windows ကီးကို Windows ပေါ်လာဖို့ပဲ သုံးနေတုန်းလား? တကယ်တော့ Ctrl + Shortcut တွေလိုပါပဲ…. Windows ကိုလည်း ကီးဘုတ်ပေါ်က တခြားစာလုံးတွေနဲ့ တွဲဖက်လို့ Shortcut အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုတွေအသုံးပြုလို့ရလဲ ကြည့်ကြည့်ရအောင်… Windows ကီးကိုဖော်ပြရာမှာ Win လို့ပဲ ရေးသားသွားပါ့မယ်နော်..။
Win – ဒါတော့သိပါတယ်။ ကွန်ပျူတာ Start Menu ဖွင့်တာ ပိတ်တာပါ။
Win+ F1 – Windows Help and Support ဖွင့်ဖို့အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သိပ်မသုံးဖြစ်ကြလောက်ဘူး ထင်ပါရဲ့နော်..
Win + C – Charms ဖွင့်တာပါ။ Charms ဆိုတာကတော့ ကွန်ပျူတာ စခရင်ရဲ့ ညာဘက်ဘေးမှာ Search, Share, Start, Devices နဲ့ Settings ခလုတ်၅ ခုပါတဲ့ ဘားနဲ့ ကွန်ပျူတာ စခရင် ဘယ်အောက်ထောင့်မှာ အချိန်၊ နေ့စွဲ၊ ရက်၊ ဘက်ထရီနဲ့ အင်တာနက် စတာတွေ ပါတဲ့ အကွက်လေးတွေကို ခေါ်တာပါ။
Win + D – ဒါတော့ Display ကို Hide လုပ်တာပါ။ ဆိုလိုတာက ကိုယ်က တစ်ခုခုကို ဖတ်နေမယ်။ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ယောက်က ဝင်လာလို့ သူတို့ကို မမြင်စေချင်ဘူးဆိုရင် Win+D သာ နှိပ်လိုက်!! ကွန်ပျူတာ Desktop ပဲ ပေါ်နေတော့မှာပါ။ ကိုယ်ဖွင့်ထားတာတွေ အားလုံး ခဏပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ ပြန်ပေါ်ချင်ရင်လည်း Win + D သာ နှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ။
Win + E – File Explorer ဖွင့်တာပါ။
Win + F – Search Charm ဖွင့်ပြီး ဖိုင်ရှာတာပါ။
Win + H – Share Charm ဖွင့်တာပါ။
Win + I – Setting Charm ဖွင့်တာပါ။
Win + K – Devices Charm ဖွင့်တာပါ။
Win + L – ကွန်ပျူတာကို Lock ချတာ၊ ဒါမှမဟုတ် User ပြောင်းတာတွေကို ဒီshort cut နဲ့ သုံးလို့ ရပါတယ်။
Win + M – Minimize လုပ်တာပါ။ Minimize လုပ်တာမှ ဖွင့်ထားသမျှ Window အားလုံးကို Minimize လုပ်သွားတာပါ။
Win + P – Presentation Display Mode ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။ Project Charm ပွင့်လာပြီး ရွေးရမှာပေါ့နော်..
Win + Q – Search ပါ။ ကွန်ပျူတာထဲက ဘယ်ဖိုင်ထဲမှာမဆို သူက ရှာပေးနိုင်ပါတယ်။
Win + R – ဒါကတော့ တော်တော်များများ သိထားပြီးသား ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ Run dialog box ပါ။ ကွန်ပျူတာ အရမ်းလေးနေတာဖြစ်ဖြစ်၊ ဟန်းနေတာမျိုး ဖြစ်ဖြစ် ဒါလေးနှိပ်ပြီး အထဲက Cache တွေ ရှင်းလို့ ရပါတယ်။ အတော်ကို အသုံးဝင်တာလေးပေါ့နော်..
Win + T – Task Bar ပေါ်မှာ ရှိတဲ့ App တွေကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
Win + U – Ease of Access Center ကို ဖွင့်ပေးတာပါ။ ဒါတော့ သုံးခဲမယ် ထင်ပါတယ်နော်..
Win + X – Quick Link Menu ကို ဖွင့်ပေးပါတယ်။
ဒါဆိုရင်တော့ Windows Logo ကီးလေးကို တော်တော်သုံးတတ်လောက်ပြီ ထင်ပါရဲ့.. တခြား Tab နဲ့ တွဲတာတွေ၊ enter နဲ့ တွဲတာတွေရှိနေသေးပေမဲ့ အများကြီးဆိုမှတ်ရခက်နေမှာစိုးလို့ ဒီလောက်ပဲဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်များကျမှ ပြန်ဆုံကြပါဦးစို့…။
Previous Previous post: Bibiano Fernandes ချန်ပီယံခါးပတ်ပြန်ရနိုင်မည့် အချက် (၅)ချက်
Next Next post: အခမဲ့ဆေးခန်း (၅) ခုနဲ့စာသင်ကျောင်းတွေဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ ဒေါက်တာထိန်
(၅) စက္ကန့်နဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကို ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ရာ
ဘဝမှာ ခက်ခဲတွေကြုံလာရင် ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆုံးဖြတ်ကို မဖြစ်မနေချရတော့မယ်ဆိုရင် လူတော်တော်များများက စိုးရိမ်ပူပန်လာတာ၊ စိတ်သောကရောက်တာတွေဖြစ်လာတတ်ကြပါတယ်။ စိုးရိမ်ပူပန်မှုကို ခံစားနေရတဲ့ သူတွေက အဲဒါကို ထိန်းချုပ်ဖို့ရာ ခက်ခဲကြပါတယ်။ သင်က စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကို အမြဲတမ်းတွန်းလှန်ခဲ့ရဖူးရင် အကြောက်တရားတွေ၊ စိုးရိမ်သောကတွေက ရုတ်တရက်ပေါ်ပေါ်လာတတ်ကြမှာပါ။…
Published: December 20, 20192:14 pm